जाडो महिनामा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने? (टिप्ससहित) - Bichar news - Nepali Online News Portal
जाडो महिनामा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने? (टिप्ससहित)
मुख्य खबर, रोचक, स्वास्थ्य
काठमाडौं। चिसो ह्वात्तै बढेको छ। काठमाडौं लगायत देशभरको मौसममा आएको अदलबदलका कारण धेरैलाई मौसमी रुघाखोकीले सताएको छ। कोरोनाको त्रासकाबीच मौसमी फ्लू भएका मानिसहरु पनि निकै आत्तिएका छन्। कोरोनाको कहरमा जाडोमा अझ भयावह हुनसक्ने भनदै विज्ञले चेतावनी दिईरहेका कारण धेरै अभिभावकलाई बच्चाहरुको हेरचाह कसरी गर्ने, यो जाडो कसरी कटाउने भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ । किनकी जाडो मौसम यसैपनि बालबालिकाको लागि सबैभन्दा संवेदनशील समय हो।
यो मौसममा बच्चाहरूमा रुघाखोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वासको समस्या, निमोनिया, टन्सील, छाला फुट्ने जस्ता समस्याले सताउन सक्छ । त्यसकारण यस्ता समस्याबाट बचाउन केहि टिप्स यहाँ प्रस्तुत छ।
3. घाममा राख्दा समय समयमा पानी खुवाउने । तर जाडो महिनाभरी राम्ररी उमालेको मनतातो पानी प्रयोग गर्नुहोस्। साना बालबाबालिकालाई बिहानीपखको घाममा सुताउँदा उनीहरूलाई भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ।
4. साँझ बिहान खेलेर आएपछि उनीहरुको कपडा परिवर्तन गरिदिनुहोस् र हलुका मोस्चराईज गरिदिनुहोस्।
5. न्यानो कपडा लगाईदिने । तर बाक्लो कपडा प्रयोग नगरिदिनुहोस्।
6.मौसमी फलफुल खुवाउनुहोस् तर अत्याधिक चिसो हुने फलफूल नखुवाउनुहोस् । चिसो समयमा फलफूललाई तातो पानीले धोएर वा तातो पानीमा डुबाएर खुवाउन सकिन्छ।
7. हिटर बालेर लामो समयसम्म बच्चालाई सेकाउनु हुँदैन। सहज रुपमा हावा आवतजावत गर्ने कोठामा बस्ने, सुत्ने, खेल्ने वातावरण मिलाउनुहोस्।
8. झोलिलो खानेकुरा खुवाउनुहोस्।
9. नवजात शिशुको कपडा समय समयमा फेर्ने, डाईपर लामो समयसम्म एउटै प्रयोग गर्नुहुँदैन।
10. कहिलेकाहिँ रुघाखोकीले गर्दा बालबालिकाको नाक टालिने गर्छ । तर भिक्स, सन्चो वा अन्य चिज नलगाउनहोस् बरु नरम कपडा या कपासले सफा गरिदिनुहोस्।
11. बजारमा किनेको दूधमा अन्य अखाद्य कुरा पनि मिसिएको हुनसक्छ । अभिभावकले यो कुरा मनन गरी राम्ररी तताएर केहि बेर पाक्न दिएर मात्रै दुध आफ्ना बालबालिकालाई पिलाउनुहोस्।
याद गर्नुहोस् नवजात शिशु राख्ने कोठालाई २५ देखि २८ डिग्री तापक्रममा राख्नु पर्दछ।
12. ६ महिनाभन्दा माथिका बच्चालाई आमाको दूधका साथै तातो झोल पदार्थ खुवाउनुपर्छ।
13. जाडोको समयमा बालबालिकाको सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। ३ देखि ४ दिनको बिचमा मनतातो पानीले घाम लागेको ठाउँमा नुहाएर तौलियाले पुछेर न्यानो कपडा लगाईदिनुहोस्।
- ४ मंसिर २०७७, बिहीबार ०८:२३ मा प्रकाशित